🥇 Laptọọpụ kachasị mma maka ihe na-erughị 500 euro 🥇 Kedu nke ị ga-ahọrọ?
Mgbe ị na-anwale mbadamba nkume ma ọ dabere maka ihe eji eme ihe, ọ dịghị nlọghachi azụ. Mụ onwe m na-etinye ọkara oge m na-ejikọta na ịntanetị na mbadamba nkume, ebe ọ bụ na ọ dị mma karịa kọmputa na nha ihuenyo na-eme ka ọ dị mma iri ọdịnaya karịa ekwentị. Mana oge mgbe PC agaghị abịa, ọ gaghị adịkwa n'ihi na kọmputa ka dị na ọ ga-anọgide na-abụ nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ ọrụ, dị ka ide akụkọ a. N'ime ha, ha na-enwe mmasị n'ezie ndị a pụrụ iji mee ihe n'ebe ọ bụla, na n'isiokwu a, anyị ga-ekwu maka ya laptọọpụ na-erughị 500 euro.
1 Laptọọpụ kacha mma maka ihe na-erughị euro 500
2 Ụdị laptọọpụ kacha mma na-erughị 500 euro
3 Kedu ihe laptọọpụ na-erughị € 500 nwere ike inye gị?
3.4 Draịvụ ike
4 Laptọọpụ n'okpuru € 500 ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Laptọọpụ kacha mma maka ihe na-erughị euro 500
Ụdị laptọọpụ kacha mma na-erughị 500 euro
HP bụ ụlọ ọrụ ahụ pụtara mgbe nkewapụ nke Hewlett-Packard na 2015. Tupu nke ahụ, na aha ya gara aga, ụlọ ọrụ ahụ raara onwe ya nye na teknụzụ ozi, na-apụta ìhè, karịa ihe niile, na ụwa nke ndị na-ebi akwụkwọ. N'ime afọ ikpeazụ dị ka ụlọ ọrụ dị n'otu, HP ulo oru ụfọdụ akwụkwọ ndetu nke obodo na-enwechaghị afọ ojuju (jụọ nwanna nwoke ...), ma mgbe nkewa ahụ gasịrị, ika ahụ weghachitere ala niile furu efu ma ugbu a, ha bụ otu n'ime ihe kacha mma. nhọrọ mgbe ihe anyị na-achọ bụ laptọọpụ.
Na HP katalọgụ, na mgbakwunye na ndị na-ebi akwụkwọ na ndị ọzọ mpụta kọmputaAnyị na-ahụ ụdị kọmputa dị iche iche, gụnyere ụfọdụ emebere maka egwuregwu. Na, n'agbanyeghị na ha abụghị ndị a na-ahụkarị, ha na-arụpụta ma na-ere laptọọpụ maka ihe na-erughị 500 euro, na-adọrọ mmasị dị ka ihe niile ụlọ ọrụ nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nwere ike inye.
ASUS bụ ụlọ ọrụ Taiwanese nke na-arụpụta ihe niile dị iche iche nke kọmputa, dị ka nne na nna na ndịna-emeputa, peripherals, sava, workstations, monitors ... ọ bụrụ na enwere ike iji ya na kọmputa, ọ ga-abụrịrị na a ga-arụ ya ma ree ya. N'afọ 2010, ọ ghọrọ onye nrụpụta kọmputa nke anọ kachasị na mbara ala, ma taa ọ na-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa n'ụwa a.
Na katalọgụ ya, na ndị ọzọ na-atụle na ọ na-arụpụtakwa ihe dị n’imeAnyị nwere ike ịchọta ihe niile, dị ka ngwá ọrụ dị ike ma dị oke ọnụ dị ka ndị e zubere maka egwuregwu na ndị ọzọ nwere uche na ọnụ ala dị ka netbooks na-eguzogide ịpụ. Na a ọkara okwu ga-abụ ndị anyị na-emekọ ihe n'isiokwu a, ọnụ akwụkwọ ndetu ịnweta onye ọ bụla.
Acer bụ ụlọ ọrụ Taiwan ọzọ nke mkpa dị ukwuu na ụwa nke kọmputa. Ọ na-arụpụta ma na-ere ụdị ihe dị iche iche na ihe ndị dị n'akụkụ, mana ha pụtara ìhè karịa maka laptọọpụ ha. Onwe m, echere m na ha so n'etiti ndị kasị mma n'ihe banyere uru ego, na na katalọgụ ha, ha na-enye ụdị dịgasị iche iche nke na ọ bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche na ha enweghị ihe ọ bụla maka anyị.
N'ihu ọha, ha eruteghị ọkwa dị elu dị ka ibe ha nke Taiwan ọzọ, mana ha na-eme ma na-ere ụfọdụ kọmputa ndị nwere àgwà siri ike ikwere ma ọ bụrụ na anyị eleba anya na ọnụahịa ha. N'ezie, ihe nkesa nwere abụọ nke ika a, ma ha abụọ arụ ọrụ nke ọma site na ụbọchị mbụ na ọ dịghị ihe ọ bụla a na-akwụ ha ọnụ.
Lenovo bụ ụlọ ọrụ dị na China nke laptọọpụ ya na-ewu ewu nke ukwuu na obodo. Ha na-echepụta, mepụta na ire ngwaọrụ kọmputa niile dị ka mbadamba nkume, mobiles na workstations, nke a na-agbakwunyere na ngwaọrụ ndị ọzọ dị ka smart telivishọn na ekweisi. Ọ bụrụ na ha na-ewu ewu, ọ bụ, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ihi nnukwu katalọgụ na ọnụ ahịa ha.
Ma ọ bụ na Lenovo bụ akara pụrụ iche. Nkà ihe ọmụma ya bụ mee ihe niile maka onye ọ bụla, na nke a pụtara na ọ na-arụpụta ngwá ọrụ nwere ezi uche, nke na-eme ka ha ghara ịdị mma, na ngwá ọrụ ndị ọzọ dị ike, nke a haziri nke ọma na nke na-adịgide adịgide nke ga-amasị ndị egwuregwu na-achọsi ike. Na katalọgụ ya, anyị ga-ahụ ọtụtụ laptọọpụ maka ihe na-erughị € 500, mana ha agaghị abụ ndị kachasị ike na ahịa ma ọ bụ site na ika ahụ n'onwe ya.
CHUWI bụ akara a mụrụ na 2004 wee jide ọkara ụwa na mberede, mana maka mma. Site na mmalite, enwere ike ịsị na ọ bụ akara na-enye laptops kacha mma dịka uru ha bara maka ego, n'ihi ya. ha na-emeri Europe na North America.
Gịnị bụ izugbe na ya katalọgụ bụ akụrụngwa na ọnụ ahịa dị mma Ma, n'otu akụkụ, ọ bụrụ na emesịa n'isiokwu a, anyị na-ekwu maka laptọọpụ n'okpuru € 500 nwere ihe ndị dị mma, ọ bụ n'ihi CHUWI. Na nke ka mma, ọnụ ahịa dị ala nke ngwaahịa ya adịghị esonye na pastotism; CHUWI na-enyekwa nkwado dị mma, ọrụ ire ere na ezigbo nkwa, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụdị mbụ anyị ga-enyocha ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ kọmputa dị ọnụ ala.
Kedu ihe laptọọpụ na-erughị € 500 nwere ike inye gị?
Laptọọpụ ọnụ ahịa n'okpuru € 500 abụghị nke kachasị ike n'ahịa. Ọ siri ike, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, ịgụnye ihe ọ bụla pụtara ìhè n'ezie, nke a gụnyere ihe ngosi. Banyere nha ya, na-eburu n'uche na ihe na-erughị 500 € 100-200 gụnyere, anyị nwere ike ịhụ. site na 10.1 inch nke ihe a maara dị ka a «Netbook» na nke 15.6 inch karịa ihe a maara dị ka nha ọkọlọtọ. Ọ dị ụkọ ga-abụ ịchọta laptọọpụ nke ụdị a nwere ihuenyo 17 inch. Ma e nwekwara nkọwa ọzọ a ga-atụle.
Size bụ ihe kacha mma anyị nwere ike ịhụ na ihuenyo, mana ị ga-elele mkpebi ya. N'iburu n'uche na anyị na-ekwu maka laptọọpụ na-erughị € 500, ọ ga-abụ na anyị ga-ahụ kọmputa nwere ihuenyo. pụrụ iche mkpebi nke ahụ agaghị eme ka ọ bụrụ HD. Ọ bụ ezie na a naghị ewepụ ha na ha rutere ebe ahụ, mkpebi a na-ahụkarị na ihuenyo nke kọmputa ndị a bụ 1366 × 768 na nha 15.6 sentimita asatọ.
Laptọọpụ dị ọnụ ala, ọ bụ n'ihi na ha na-egbutu otu akụkụ ma ọ bụ karịa. Iji nwee ike inwe ọnụ ala dị ala, ị ga-ahọrọ ihe ndị nwere uche, ma ọ bụ ụzọ ụfọdụ ma wedata isi ihe ndị ọzọ. Banyere processor gị, ihe anyị na-ahụ nwere ike ịbụ ihe dakọtara na Intel i3, ma ọ ga-adabere na ika na ihe ndị ọzọ, dị ka mbelata ndị ahụ e kwuru n'elu.
Mana, dị ka anyị kwurula, ndị na-emepụta ihe na-ebupụta akụrụngwa nwere nhazi dị iche iche ka anyị wee họrọ nke kacha amasị anyị, na enweghị ike iwepụ na anyị ga-ahụ laptọọpụ maka ihe na-erughị € 500 nke gụnyere processor. Intel i5 ma ọ bụ dakọtara. Karịa nke ahụ, ọ bụ ihe na-agaghị ekwe omume, ọ pụkwara ịpụta na ọ bụ ụgha ma ọ bụ na ndị ọzọ so n'òtù ahụ, dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ga-adaba.
Ebe nchekwa RAM bụ ihe ga-eme ka anyị nwee ọtụtụ ma ọ bụ obere usoro mepere emepe ma kwaga ngwa ụfọdụ ka mma. N'ime otu ndị nwere ọnụ ahịa ndị a, nke a na-ahụkarị bụ na anyị na-ahụ laptọọpụ 4GB Ram, nke bụ opekempe dị mkpa iji na-agba ọsọ kọmputa nwere sistemụ arụmọrụ dị ka Windows 10. Ọ bụrụ na kọmputa dị ntakịrị, dị ka Netbook, ọ ga-abụ na enwere 2GB nke RAM, nke ga-akpali nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ Microsoft ma ọ bụ ụfọdụ Linux. nkesa, ma ọ gaghị abụ nhọrọ kacha gbasaa.
Olileanya, ma ọ bụ ọ bụrụ na ihe anyị na-ahọrọ bụ akara na-eto eto, anyị nwere ike ịchọta laptọọpụ na ya 8GB nke RAM, mana ndị nhazi ga-esonyere ya akọ dị ka Intel Celeron, i3 ma ọ bụ ihe dakọtara. Ọ bụ ezie na RAM abụghị akụrụngwa kachasị ọnụ nke etinyere na kọmpụta, ọ dị ụkọ ga-abụ na anyị na-ahụ otu n'ime kọmpụta ndị a nwere RAM karịa.
draịva ike nke laptọọpụ na-adịghị ọnụ na-adịkarị ọnụ ala. Ọ bụ otu n'ime ebe a na-egbutu, mana igbutu na-abụkarị maka ụdị, ọ bụghị nchekwa. Diski nkịtị na laptọọpụ nke na-erughị € 500 nwere ike ịbụ HDD (nke bụ ndụ niile) nke 500GB. draịva HDD dị nwayọ karịa SSDs, mana dịkwa ọnụ ala, yabụ ị nwere ike itinye draịva siri ike nwere ikike dị mma, ọ bụrụhaala na anyị achọghị ịga, dịka ọmụmaatụ, na 1TB.
N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara ike ịhụ laptọọpụ nwere diski SSD, mana nha ha ga-adị ntakịrị. Nke 256GB SSD Ha dị na ụdị ụfọdụ, mana nke a na-apụtakarị na ihuenyo ya erughị sentimita 15.6 nke a na-ewere dị ka ọkọlọtọ yana na processor ya, n'etiti ndị ọzọ, dịkwa akọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ndị nrụpụta anaghị adị ike na ngwaọrụ mmefu ego.
Laptọọpụ n'okpuru € 500 ọ bụ ezigbo nhọrọ?
Ọfọn, ọ ga-adabere n'ojiji anyị ga-eji ya. Na dịka ọmụmaatụ, nke onye dere edemede a na-eji dee ya. N'ekwughị ihe ọ bụ, enwere m ike ịkọ na ọ nwere Intel i3, 4GB nke RAM na 500GB nke diski ike HDD, nke na-eme ka ọ bụrụ ihe ziri ezi na-agba ọsọ Windows, mana ọ na-arụ ọrụ nke ọma ka m na-arụ ọrụ na onye nchịkọta akụkọ WordPress, na-enwe. Ngwa Open mail, lelee Telegram m ma gee egwu n'otu oge. Ma ihe ka na-akawanye mma mgbe m nọ na Linux, ebe, maka ojiji a, anaghị m atụ uche ihe ọ bụla.
Ugbu a: ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ iji ngwa dị arọ dị arọ rụọ ọrụ ... Ọ dabere na ika. Enwere ụdị ndị na-eto eto na-enye ezigbo akụrụngwa maka ihe na-erughị € 500 ma na ọnụahịa ahụ ha gụnyere i5 processors, 8GB nke RAM na diski SSD, yabụ na ha ga-abụ ezigbo nhọrọ n'ihi na anyị nwere ike iji ya mee ihe n'ozuzu ya n'ejighị ego. Ezigbo ọmụmaatụ bụ ụdị ị nwere n'okpuru:
Anyị ga-enwe nsogbu ma ọ bụrụ na anyị chọrọ, dịka ọmụmaatụ, iji ọtụtụ egwu dezie vidiyo ma ọ bụ ọdịyo, ebe ọ bụ na sistemụ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
Maka "geek" nke na-adịghị mkpa Windows, echere m na ụfọdụ laptọọpụ n'okpuru $ 500 bụ nnukwu nhọrọ, ebe anyị nwere ike ịwụnye nkesa Linux dị arọ na ya ma mee ka ihe niile rụọ ọrụ nke ọma. N'ezie, na-eburu n'uche na Ngosipụta na okirikiri nhọrọ ukwuu agaghị abụ nke kacha mma.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Ahịa » Laptọọpụ maka ihe na-erughị 500 euro